I-china i-Best Best Spring Flower design tableware dinner set kanye nezipho zabakhiqizi nabathengisi FUXINGYE
Isethi yokudla kwethebula yasetafuleni edume kakhulu yasentwasahlobo nezinto zesipho
Leli qoqo umklamo wethu omusha, i- Imbali yasentwasahlobo kuyinto ethandwa kakhulu kulo nyaka. Siyisebenzisa kusethi yokudla kwakusihlwa okungagcini ngokudla kuphela futhi okungahlobisa ikhaya lakho. Le nhlanganisela nayo ithandwa kakhulu emhlabeni.
Le yi-giftware esezingeni eliphakeme esethwe nayo Imbali yasentwasahlobo uchungechunge lungenza ipuleti, isethi yekhofi, izinkomishi, itiye, inkomishi nososo, isaladi isitsha, ithileyi lesangweji kanye nekhekhe lokuma njalonjalo, uma uthanda lesi sitayela kodwa umkhiqizo ohlukile, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi ukuthola.
Okubalulekile: i-china entsha yethambo / ithambo elihle lase-china
Usayizi: Dia 26.7 * H3.7cm
Ipuleti le-dessert eliyindilinga elingu-8inch
Usayizi: Dia 20.2 * H3cm
Usayizi: Dia 20.2 * H5cm
Inkomishi engu-220cc eqondile nenkomishi
Inkomishi engu-90cc eqondile nenkomishi
Usayizi Wenkomishi: Dia5.6 * H6.7cm
Isoso: Dia12.8 * H2cm
Umgudu we-360ml ZD
Usayizi: Dia9 * H10.5cm
Siseshe kude naseduze ukwenza leli qoqo elihle. uphawu nobuhle obuphelele obulethwa yilezi zimbali kuzokwenza zonke izingxoxo zakho ezinhle zokuxoxa. Ngaphandle kokumangalisa, yonke i-dinnerware yethu yezimbali nayo isebenza ngendlela emangalisayo futhi ihlala isikhathi eside futhi!
Siyazi ukuthi ukwethula kubalulekile, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngamadili edina nakumaphaphu. I-dinnerware yethu yenza isimangaliso sokuthi uqinisekile ukuthola izincomo! Noma ngabe uthokozela umuzwa wanamuhla nowesikhathi samanje noma isitayela semvelo ngokwengeziwe, ukhetha ukuthi izivakashi zakho zizokwethuka lapho uzipha isidlo sakho.
Okwesethi yedina, imvamisa sinenhlanganisela engezansi.
I-24pcs isethi yedina
6pcs 10.5inch idina ipuleti
6pcs 8inch ipuleti lesaladi
Ipuleti le-dessert eli-6pcs
20pcs isidlo sakusihlwa
4pcs 10.5inch idina ipuleti
4pcs 8inch ipuleti lesaladi
Ipuleti le-4pcs le-dessert
4pcs 220cc indebe + 4pcs isoso
I-18pcs isethi yedina
futhi ungahlanganisa noma iyiphi into oyifunayo bese ukhetha okokusebenza: ubumba, i-china bone entsha noma i-bone bone china. kuyavumelana nezimo futhi kuncike kuwe.
Kunconyelwe i-DISHWASHER, MICROWAVE NE-OVEN, Kulula ukuyihlanza. Yonke i-tableware ikhiqizwa kusetshenziswa okokusebenza okunemvelo kuphela. Iphephe ngokuphelele empilweni futhi ilungele ukusetshenziswa kwansuku zonke.
kuyisipho esihle futhi esicatshangelwe kahle usuku lokuzalwa lwabangani, uKhisimusi, uSuku Lokubonga nezinye izinsuku ezingasoze zalibaleka. Bazohlatshwa umxhwele izifiso zakho eziqotho nemicabango yakho enomusa.
Ukupakisha: ibhokisi elinsundu noma ibhokisi lombala, i-Western Europe, i-Eastern Europe, iTurkey, i-Middle East, i-Australasia, i-North America, i-Central / i-Ningizimu Melika
Indlela yokukhokha:L / C, T / T.
Langaphambilini Isethi yesidlo sakusihlwa esithandwayo nezinto zesipho
Olandelayo: Uchungechunge lwengadi yezwe